प्रदेशमा स्वास्थ्यका तीन प्रमुख संरचना, कुन प्रदेशमा कति पद, के/के थपिए, के हटे ? (नयाँ संगठन संरचनासहित) – Health Post Nepal
२०७५ पुष १७ गते १४:५२
सरकारले पास गरेको संघीय संरचनाअनुसारको संगठन संरचनालाई परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिएको छ ।
पछिल्लो संरचनामा ७७ जिल्लासहित प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य आपूर्तिकेन्द्र र तालिमकेन्द्रसमेत सहसचिवस्तरका (११औँ तह)का निर्देशन रहने गरी संरचना बनेका छन् । यस आधारमा प्रदेशमा स्वास्थ्यमा प्रमुख तीनवटा संरचना रहनेछन् ।
अघिल्लो सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्यले पठाएको नयाँ संगठन संरचनालाई पारित गरेसँगै सरकारले सामायोजनका लागि सूचनासमेत निकालिसकेको छ ।
नयाँ संगठन संरचनामा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका दरबन्दी बढेका छन् भने प्रदेश मन्त्रालयमा रहेका दरबन्दी उल्लेख्य रूपमा घटेका छन् ।
त्यसबाहेक कोल्डचेन प्रदेश निर्देशनालयमा रहेको कोल्डचेन सहायक र फार्मेसी, आयुर्वेद र नर्सिङको दरबन्दीमा पनि हेरफेर भएको छ । यस आधारमा हेर्दा ११औँ तह (सहसचिव)सरहको दरबन्दी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यको हुनेछ ।
पछिल्लो संरचनामा हेल्थ एजुकेसन समूहको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा काटिएर सातै प्रदेशमा कायम रहँदा ११औँ तहको एउटा दरबन्दी थपिएको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयमा अघिल्लोपटक पास भएको संगठन संरचनामा व्यापक कटौती भएको पाइएको छ । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यसअघि रहेका स्वास्थ्यका २० दरबन्दीमध्ये अहिले ९ वटा मात्रै बाँकी छन् ।
नवौँ/दशौँ तहको प्रमुख मेडिकल अधिकृत (जहेस) १, पब्लिक हेल्थ वा एकीकृत चिकित्सा समूहका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक १, वरिष्ठ/उपस्वास्थ्य प्रशासक पब्लिक हेल्थ नर्सिङ १ र वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका १ जना छन् ।
यसअघिको संरचनामा रहेका ३ मेडिकल अधिकृत (मेसु) दरबन्दी हटाइएका छन् । तीबाहेक आयुर्वेद चिकित्सक आठौँ १ छ ।
सातौँ/आठौँ तहका पहेन/पहेन नर्सिङ अधिकृत पुरानो संरचनामा रहेको दरबन्दी हटाएर क. नर्सिङ अधिकृत १ जनाको दरबन्दी राखिएको छ ।
त्यसैगरी, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८औँ तहको दरबन्दी १, वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत १, वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा अधिकृत १, पुरानो संरचनामा हरेको हेल्थ असिस्टेन्ट ३ जनाको दरबन्दी पनि पछिल्लो समय हटाइएका छन् । त्यसैगरी ५/६/७ तहका स्टाफनर्स दरबन्दीसमेत पछिल्लो समय हटाइएको छ । फार्मेसी सहायक पनि हटेको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा प्रदेश १, २ र ३ को संरचनामा ९/१० तहको १/१ जना निर्देशक, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक ९/१० तहकै १ जना, त्यसैगरी ७/८ तहको इन्जिनियर, फार्मेसी अधिकृत, ७/८ तह, फार्मेसी सहायक ५/६/७ १ जना, ४/५/६ तहका वरिष्ठ कोल्डचेन अधिकृत २ जनाका दरले तीन प्रदेशमा ६ जनाको दरबन्दी कायम छ ।
एक निर्देशक, एक वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक, बायोमेडिकल इन्जियिनर, फार्मेसी अधिकृत १, फार्मेसी सहयाक १, वरिष्ठ कोल्डचेन अधिकृत २ जनाको दरबन्दी राखिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९/१०औँ तहका एक/एकजना निर्देशक, बायोमेडिकल इन्जिनियर १, फार्मेसी अधिकृत १, फार्मेसी सहयक १, वरिष्ठ कोल्डचेन अधिकृत २ जनाका दरले दरबन्दी थप भएको छ ।
प्रदेश सरकारमातहत रहने सात स्वास्थ्य प्रदेश निर्देशनालयमध्ये १, २, ३ र गण्डकीमा हेल्थ इन्स्पेक्सन एघारौँ (हेई) तहका निर्देशक एकजना रहनेछन् । विगतमा ती प्रदेश निर्देशनालयमा रहेको प्रमुख मेडिकल अधिकृत (मेसु) ९/१० तहको जहेस समूहको चिकित्सक दरबन्दी भने काटिएको छ ।
सात प्रदेशका स्वास्थ्य तालिमकेन्द्र
नवस्थापित प्रदेशस्तरीय सातै तालिमकेन्द्रमा हेल्थ एजुकेसन समूहका एघारौँ तहका निर्देशक, सोही समूहका ९/१० तहका वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशासक ७ प्रदेशमा १/१ जना, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह ९/१० का वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक १/१ जना, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहकै वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत २ जना र हेल्थ एजुकेसनकै वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ तहका २/२ जना थपिएका छन् ।
त्यसैगरी, तालिमकेन्द्रमा कम्युनिटी नर्सिङ समूह वरिष्ठ अधिकृतको दरबन्दी प्रत्येक केन्द्रमा एक/एक जनाका दरले रहनेछ ।
वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासन ९/१० तहको पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन/एकीकृत चिकित्सक दरबन्दी एक÷एक छन् । त्यसैगरी, एकीकृत चिकित्सातर्फका वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासकको दरबन्दी पनि काटिएको छ ।
९/१० तहका स्वास्थ्यशिक्षा प्रशासकको दरबन्दी पनि प्रत्येक निर्देशनालयमा १/१ वटा रहनेछ । त्यस्तै, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक ९/१० तह हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह २/२ जनाका दरले रहनेछन् । वरिष्ठ क. आयुर्वेद विज्ञ ९/१० तह आयुर्वेद समूहका एक÷एक जना रहनेछन् । कम्युनिटी नर्सिङतर्फको वरिष्ठ पब्लिक हेल्थ नर्स प्रशासक ९/१० तहको एकजनाको दरबन्दी भने काटिएको छ । त्यसको ठाउँमा वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक जनस्वास्थ्य नर्सिङ ९/१० तह थपिएको छ ।
मेडिकल अधिकृत जहेस आठौँ तहका १/१ जना, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ तहका हेई समूहका प्रत्येक ठाउँमा २/२ रहनेछन् । त्यसगरी, वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशिक्षक ७/८ तहका हेल्थ एजुकेसन समूहका १÷१ दरबन्दी छन् ।
वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत (कम्युनिटी) समूह १/१ राखेर वरिष्ठ जनस्वास्थ्य नर्सिङ हटाइएको छ । वरिष्ठ इन्टेमोलोजिस्ट/वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हेई समूहका १/१ जना गरेर चारजना रहनेछन् । वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत दरबन्दी स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट हटेको छ ।
हेल्थ असिस्टेन्ट वा सोसरह ५/६/७ तहको हेई समूहका २/२, ल्याब टेक्निसियन सोही तहका १/१, कविराज १/१ रहनेछन् । कोल्डचेन सहायकको १/१ जनाको दरबन्दी भने निर्देशनालयबाट हटेको छ ।
प्रदेश ५ स्वास्थ्य निर्देशनालय
प्रदेश ५ को स्वास्थ्य निर्देशनालयमा ११औँ तहका एकीकृत चिकित्साका रूपमा एकजना निर्देशक रहनेछन् । ९/१० तहको मेसुको दरबन्दी हटाइएको छ । वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासक ९/१० तहको दरबन्दी भने कायम राखिएको छ ।
त्यसैगरी, पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन/एकीकृत चिकित्सा समूहको ९/१० तहको १, वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासक एकीकृत चिकित्सकको दरबन्दी भने हटेको छ । वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशासन ९/१० तहको हेल्थ एजुकेसन दरबन्दी १ छ भने वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक हेईका २ दरबन्दी छन् ।
वरिष्ठ/क. आयुर्वेद विज्ञ ९/१० तहको १, वरिष्ठ पब्लिक हेल्थ नर्सिङ प्रशासक ९/१० तहको कम्युनिटी नर्सिङ हटाएर अस्पताल नर्सिङ प्रशासनको दरबन्दी थपिएको छ । मेडिकल अधिकृत जहेस समूह १, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७÷८ तह हेई समूह २, वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशिक्षक ७/८ तहको हेल्थ एजुकेसन समूह १, वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत कम्युनिटी नर्सिङको १ दरबन्दी राखिएको छ ।
वरिष्ठ इन्टेमोलोजिस्ट/वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ तहको हेई समूहको १ दरबन्दी छ । पुरानो संरचनामा रहेको वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत ७/८ तहको फार्मेसी हटाइएको छ । हेल्थ एसिस्टेन्ट वा सोसरह ५/६/७ तहको हेई समूहका २, प्रयोगशाला प्राविधिक ५/६/७ तहका १ जना, कविराज ५/६/७ तहका १/१ जना रहनेछन् । स्वास्थ्य निर्देशनालयमा रहेका कोल्डचेन सहायकको दरबन्दी भने हटेको छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय
यस प्रदेशमा ११औँ तहका निर्देशक पहेए १/१, प्रमुख मेडिकल अधिकृत मेसु ९/१० तहका जहेस एकजना हटाएको छ । वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासनक ९/१० तहको पहेए/एचीको एक दरबन्दी छ । वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशासक ९/१० तहको १, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक (हेई) २ जना, वरिष्ठ क. आयुर्वेद विज्ञ ९/१० तहको १ दरबन्दी छ । वरिष्ठ पहेन प्रशासक ९/१० तह र वरिष्ठ उपस्वास्थ्य प्रशासक ९/१० तहको एकीकृत चिकित्सा हटाइएका छ । वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक ९/१० तहको जनस्वास्थ्य नर्सिङ समूहको १ जना थप भएको छ ।
मेडिकल अधिकृत आठौँ तह (जहेस) १, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ तह हेई समूह २, वरिष्ठ स्वास्थ्यशिक्षा प्रशिक्षक (हेए) ७/८ तह १, वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत कम्युनिटी नर्सिङ १, वरिष्ठ इन्टेमोलोजिस्ट/वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत (हेई) १ छन् । फार्मेसीको दरबन्दी भने काटिएको छ ।
हेल्थ असिस्टेन्ट वा सोसरह ५/६/७ तह (हेई) २, ल्याब टेक्निसियन ५/६/७ तह १, कविराज ५/६/७ तह १ जना छन् भने कोल्डचेन सहायक दरबन्दी हटेको छ ।
One thought on “प्रदेशमा स्वास्थ्यका तीन प्रमुख संरचना, कुन प्रदेशमा कति पद, के/के थपिए, के हटे ? (नयाँ संगठन संरचनासहित)”
prem singh bhnadari says: